चर्चित फुजेल घटनाका प्रतिवादीलाई सफाइ, छबिलालको स्वागत प्रचण्डले गर्ने ! « Lokpath
चर्चित फुजेल घटनाका प्रतिवादीलाई सफाइ, छबिलालको स्वागत प्रचण्डले गर्ने !
चितवन– गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्यासम्बन्धी मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।
“प्रतिवादीले मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने शङ्कारहित प्रमाणबाट माग दाबी पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा आरोपित कसूरबाट सफाइ हुने ठहर्छ”, फैसलामा भनिएको छ । घटनाका प्रतिवादी गोरखा फुजेल बस्ने सीता अधिकारी, छविलाल पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, अजीव भनिने परशुराम पौडेल, हिमलाल अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, विष्णु तिवारी, कालीप्रसाद अधिकारी, भीमसेन भनिने भीष्मराज पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, जानुका पौडेल र सुभद्रा तिवारीले सफाइ पाएका हुन् ।
उनीहरुमध्ये छविलाल कारागारमा तथा अन्य सामान्य धरौटी र तारेखमा छन् । प्रतिवादीमध्ये रुद्र आचार्य भने विदेशमा रहेको बताइएको छ ।
अदालतले आचार्यको मुद्दा भने मुल्तबीमा राखेको छ । फैसलामा भनिएको छ, “मृतकलाई गोली प्रहार गर्ने भनिएका प्रतिवादी रुद्र आचार्य अदालतको म्यादमा हाजिर नभई फरार रहेको हुँदा प्रतिवादी पछि हाजिर भए वा पक्राउ परेका बेला निजलाई यसै मिसिलबाट कारवाही हुने छ”, फैसलामा अगाडि भनिएको छ, “निजको हकमा सावित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको १९० बमोजिम मुल्तवीमा राखिदिने ठहर्छ ।”
विसं २०७० चैत ३० गते चितवन जिल्ला अदालतमा १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसपछि २२ पटक पेशी सरेर फैसला भएको हो ।
यसैबीच सोमबार छबिलाल रिहा हुने भएका छन् । उनको रिहाई हुँदा स्वागत गर्न नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड जाने तय भएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७५,भाद्र,२४,आईतवार १५:५६